Wasiirro ka tirsan Xukuumadda oo ku wajahan Gobolka Shabeellada Hoose |
Wasiirro ka tirsan Xukuumadda oo ku wajahan Gobolka Shabeellada Hoose
purchase tadalafil, purchase dapoxetine. Wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka, Cabdullaahi Goodax Barre iyo wasiirka gaashaandhigga ahna ku simaha wasaaradda amniga Qaranka, Maxamed Sheekh Xasan Xaamud ayaa lagu wadaa inay maanta tagaan deegaannadii lagu dagaalamay ee gobolka Shabeellada Hoose.
Socdaalka wasiirradan ayaa imaanaya kaddib kulan deg-deg ah shalay ay yeesheen guddiga amniga iyo siyaasadda, kaasoo ay kasoo saareen in wafdi wasiirro ay sida ugu dhaqsiyaha badan loogu diro gobolkaas si ay xal uga gaaraan colaadda ka jirta.
Goobaha ay tegi doonaan wasiirradan ayaa waxaa ka mid ah degmada Marka oo ah xarunta gobolka Shabeellada Hoose oo ay shalay la wareegtay mid ka mid ah labadii maalleeshiyo ee dhawaanahan dagaalamayay iyo deegaanka Lambar 50 oo isna uu shalay ka dhacay dagaal khasaare nafeed sababay oo socday muddo shan saacadood ah.
Degmada Marko iyo deegaanka Lambar 50 ayaa daggan saaka, inkastoo shacabka ku nool goobihii lagu dagaalamay oo dhan ay baqdin ka qabaan inay dagaallo kale dhacaan, iyadoo aan la ogeyn sida wasiirradan ay go’aan uga gaari karaan colaadda taagan.
Colaadahan oo ka billowday muran dhul ayaa isku bedelay siyaasad sida uu ka hore u sheegay warbaahinta guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose, C/qaadir Shiikh Maxamed Nuur Siiddii, iyadoo dagaalladan ay muddooyin badan soo laalaabteen.
Wasiirradan ka socda xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu wadaa inay kulammo kala duwan la yeeshaan hoggaamiyeyaasha malleeshiyooyinka ay dirirtu dhexmartay iyo waxgaradka gobolka, markaas kaddibna ay soo saari doonaan go’aanno colaaddan xal looga gaarayo.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa dhowr jeer oo hore damacday inay colaaddan xal u hesho, balse heshiiyo la gaaray kaddib ayay colaaduhu dib u soo laabteen, iyadoo dowladdu ay sheegtay inaysan ka daalayn dadaalka ay ku doonayso xal u helidda colaadahan oo kale.
Qaramada Midoobay iyo Midowga Afrika ayaa dhankooda ku baaqay in dagaalladaas sida ugu dhaqsiyaha badan lagu joojiyo, iyagoo ugu baaqay dhinacyada is-haya inay tixgeliyaan go’aannada xukuumadda iyo dadaalka lagu doonayo in colaadda lagu hakiyo.